Distrikan’Ambatondrazaka : Ho vitaina ny RN 44
Nidina tany amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny filoha Andry Rajoelina ny 21 mai 2019. Maro ireo tetikasa hatomboka araka ny velirano nataony tamin’ny vahoaka. Ny tanjona dia ny hitondrana ny fandrosoana sy hisitrahan’ny vahoaka izany. Nambaran’ny Filoha ary fa hatomboka amin’ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana iny lalana RN44, làlana izay ho vitaina manontolo. Hisy ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa mipàka mivantana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Izany no atao dia mba hisitrahan’ny vahoakan’Ambatondrazaka ny teti-bola nasiam-panovana ho an’ny taona 2019 hoy ihany filoha Andry Rajoelina.